Voafandriky ny fandrika navelatro aho
"Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, … mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo."Hebreo 4:12
«Mbola tena kely aho no tsy nisy ray aman-dreny intsony. Nisaraka izy ireo raha vao dimy taona aho. Dadabe sy Nenibe no nandray ahy, ary avy eo dadatoa iray, mandra-paha 15 na 16 taona ahy. Hatreo aho dia nizaka tena. Dia nanomboka ny fiainana naharitra ela tanaty zava-mahadomelina sy herisetra.
Indray andro aho dia nifanena tamina mpivady izay tsy hitako intsony taorianan’ny mariaziny. Nandritra izay fotoana izay izy ireo dia niova fo, ary noresahiny tamiko ny fiainany vaovao amin’ny maha kristiana azy. Dia nitsidika ahy matetika izy ireo, ary niresaka an’Andriamanitra sy ny finoan’izy ireo izahay. Mody niseho ho malala-tsaina aho, kanefa ny tanjoko dia ny hanozongozona ny finoany vaovao. Nankany am-piangonan’izy ireo mihitsy aza aho, ary raha namaky ny Baiboly aho, dia tsy inona fa mba hampitombina tsara kokoa ny hamelezako azy ireo. Saingy nofandrihin’ny Tompo tamin’ny fandrika navelatro aho : ny Baiboly, izay noheveriko hampiasaina hanozongozonana ireo namako, dia vao mainka nampametra-panontaniana ahy. Indray alahady, izaho irery no tao an-trano. Efa alina tamin’izay, napetrako ny Baiboly, ka sambany teo amin’ny fiainako aho no nivavaka: «Tompo ô, raha marina avokoa izany rehetra izany, dia reseho lahatra aho, satria ambaran’ireo teny ireo fa vitanao izany». Nigogogogo nitomany aho. Dia tony aho natory, tahaka ny hoe nampiononina. Rehefa nifoha aho, dia tany amin’i Jesosy no nalehan’ny saiko voalohany indrindra, satria nino aho! Hafaliana tsy hay lazaina no nanenika ny tenako manontolo. Natao batisa aho taoriana kelin’izay. Nafahan’Andriamanitra teo no ho eo tamin’ny zava-mahadomelina sy ny herisetra aho. Dia nifanena tamina tovovavy kristiana iray aho. Nivady izahay ary manan-janaka lahikely mahafinaritra 3 taona. Ny fanirianay dia ny hiara-manompo ny Tompo. Voninahitra anie ho an’ny Anarany masina!»